I-China Aspiration kanye ne-Pneumatic Eveza Izinsiza kusebenza zeFektri, Umhlinzeki Wokuphefumula Nomoya Wokudlulisa Womoya
Isihlungi se-Flour mill pulse jet esetshenziswa kakhulu ezimbonini zokudla, okusanhlamvu nokuphakelayo. Iphinde isetshenziswe ezimbonini zamakhemikhali, ezezokwelapha nezinye.
Flour Milling Equipment Two Way Valve
Umshini wokushintsha okokuhambisa izinto ohlangothini lwomoya wokuhambisa uhlelo.Ukusetshenziswa kabanzi emgqeni wokuhambisa umoya womoya wokugaya ufulawa, isigayo sokuphakela, isigayo selayisi njalonjalo.
Amaveni nophiko lokuphotha lwenziwa njengesiqephu esingaguquki. I-blower yezimpande inempilo ende yokusebenza futhi ingasebenza ngokuqhubekayo.
Njenge-blower ye-PD (yokufuduka okuhle), iza nenani lokusebenzisa ivolumu ephezulu nokusebenza kahle kwevolumu ephezulu.
Njengomshini wokuphefumula osebenza kahle kagesi, umlandeli wethu we-centrifugal ufakwe esivivinyweni sokulinganisa ngokuqinile. Ifaka ngomsindo wokusebenza ophansi nokunakekelwa okulula. Ukusebenza kahle nezinga elithile lomsindo onesisindo esingu-A zombili zikhuphukela ezingeni leBanga A elilawulwa ngamazinga ahlobene nezwe laseChina.
Negative Ingcindezi Airlock
Idizayini ethuthukile nokwakhiwa okuhle kwalesi sikhiya somoya kuqinisekise ukuthi umoya uyaqina ngokwanele ngenkathi isondo elijikelezayo lihamba kahle.
Ingilazi yokubona iyatholakala ethekwini le-airlock yengcindezi engemihle ukuze ihlolwe ngqo.
Ukucindezela Komoya Komoya
Izinto zingena zisuka kokungena okuphezulu, bese zidlula phakathi kwempepho, bese zikhishwa esitolo esivela ezansi. Imvamisa ilungele ukondla impahla kumbhobho wokucindezela oqondile, i-airlock yengcindezi enhle ingatholakala efektri kafulawa.
Amapayipi womoya we-Flour Mill Principle: - Umfutho ophakeme unikezela amandla okuphakamisa zonke izinhlobo zezinto eziphakathi ezisuka ezigayweni ezigudluzayo, ezihlanzayo noma eziphelelisa i-bran ziye kuma-plansifters wokuqhubeka nokuhlunga nokuhlukanisa. Izinto zidluliswa emapayipini womoya. Izici: - Yakhelwe ngokusho ukubala ngqo; bumbela omuhle. - Yenziwe ngensimbi egingqikayo ebanzi ubukhulu bayo busuka ku-1.5mm kuye ku-2.5mm. - Amandla agqokiwe, ngaphakathi aphrintiwe nge-grade grade varnish. - Nge ...